Isendleleni iGolf 8 ebilindiwe
FANELESIBONGE BENGU | November 1, 2019
IVOLKSWAGEN iqede konke ukuqagela yethula iGolf 8 obese kunesikhathi abantu belokhu bebuza ngayo.
Abathandi beGolf kuleli nokho basazothi ukulinda ngaphambi kokuyibona emgwaqweni njengoba izofika ngasekupheleni konyaka ozayo.
KwaVolkswagen South Africa baqinisekise ukuthi kuzoza izinhlobo ezithathu okuyi-1.4 TSI, injini efanayo neyeTiguan enamandla angu-110kW, i-2.0 GTI ne-2.0 R amandla azo angakaqinisekiswa.
Zontathu lezi zinhlobo zino-gearbox ongumshini ozishintshayo iDSG.
Phesheya kwezilwandle kukhona nezinye izinhlobo zezinjini okukhona kuzo ezikadizili neziyi-hybrid. I-VW kuleli izamile ukuletha ekadizili eyayibizwa ngeGTD kwiGolf 7 kodwa yabuye yahoxiswa nokwavela imibiko yokuthi ayidayisi kahle.
Njengoba izofika ngonyaka ozayo nje kuleli, eGermany nase-Austria izoqala ukudayisa ngoDisemba. Kuzobe sekulandela namanye amazwe ase-Europe.
KwaVW bathi bayakhele ukuthi ibe yingxenye yezimpilo zabantu. Yingakho beyifake ubuchwepheshe obuningi besimanje.
Phakathi kobuchwepheshe obukhona kubalwa kubo obubizwa ngeCar2X obenza ukuthi ikwazi ukufunda imibhalo yasemigwaqweni futhi ithole ulwazi ngomgwaqo iluthola kwezinye izimoto eziqhele ngo-800 metres. Nayo iyakwazi ukudlulisa lezi zixwayiso kwezinye izimoto ezineCar2X.
Inobuchwepheshe enabo kubalwa obokusiza umshayeli njengokuthi izijikise isiteringi iphinde izinyathelele yona amfutha nokubhreka.
Ngaphakathi yonke into isebenza ngebhathini kuma-instruments nakwi-infotainment system. Uma uthanda uyigaxa ne-head-up display eveza imininingwane ebalulekile kwi-windscreen. Ifika futhi nezipikha ezintsha zeHarman Kardon kanjalo namalambu amasha.
IGolf yimoto eyintandokazi kwaVolkswagen njengoba kudayiswe angaphezulu kuka-35 million emhlabeni jikelele. Ike yakhiqizwa kuleli embonini yale nkampani ese-Uitenhage, ePort Elizabeth kwaze kwaba yiGolf 5 ngaphambi kokuthi le nkampani ikhiqize enye intandokazi iPolo.
Eminye imininingwane ngayo sizoyibika uma isivela.